Kuminze izingane ezimbili kwashona eyodwa e-swimming pool | News24
Kuminze izingane ezimbili kwashona eyodwa e-swimming pool
Johannesburg – Usana oluneminyaka emibili ubudala luminzile lwashona kanti udadewabo oneminyaka emihlanu ubudala usesimeni esibucayi ngemuva kokutholakala kwi-swimming pool esegcekeni ngoLwesihlanu ntambama.
Okhulumela i-ER24, uWerner Vermaak, uthi abosizo lokuqala banikele endaweni yesigameko eNorthriding, eGoli ngezithuba zabo-15:45 ngoLwesihlanu.
Uthi ngesikhathi abosizo lokuqala befika endaweni yesigameko, bathole owesifazane, okukholakala ukuthi ungunina wezingane, enza i-CPR enganeni eneminyaka emibili ubudala.
“Kukholakala ukuthi lezi zingane, ezingamantombazane, zitholwe ngezinye izingane kwi-swimming pool ekwi-complex,” kusho uVermaak.
OLUNYE UDABA: Kutholakale izidumbu zezingane efrijini
UVermaak uthi owesifazane ubeseyenze kuzona zombili izingane i-CPR ngaphambi kokuba kufike abosizo lokuqala, kanti futhi intombazane eneminyaka emihlanu ubudala ibisesimeni esibucayi ngesikhathi kufika abosizo lokuqala.
“Baqhubekile nokwenza i-CPR enganeni eneminyaka emibili ubudala ngaphambi kokuba zombili izingane baziphuthumise esibhedlela esiseduzane,” esho.
UVermaak uthi ingane eneminyaka emibili ubudala kuqinisekiswe isanda kufika esibhedlela ukuthi isishonile.
Uthi okwamanje abanayo imininingwane egcwele ngokuholele ekuminzeni kwezingane.